Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Port Royal amin'ny fandaharam-potoana fitsangantsanganana vaovao ho an'ny Montego Bay
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nanambara fa ny TUI, orinasa mpizahatany lehibe indrindra manerantany, dia nanampy an'i Port Royal tamin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo tamin'ny Janoary 2022. Nasongadiny fa nanamafy ny fiverenan'ireo sidina sy fitsangantsanganana mankany Jamaika ny orinasa, miaraka amina fandaharana fitsangantsanganana an-tsambo manomboka amin'ny volana Janoary. Ny orinasa dia nanoritsoritra manokana ny drafitra momba ny fitsangatsanganana an-trano any Montego Bay, ary ny fampidirana antso ho an'ny Port Royal amin'ny fandaharam-potoanan'ny fitsangantsanganana an-tsambo.
TUI, iray amin'ireo mpandraharaha mpizahatany lehibe indrindra any Jamaika ary mpiara-miombon'antoka amin'ny fizarana fizahan-tany eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, dia nanamafy ny hetsika fitetezam-paritany ho fitsangatsanganana an-tsambo any Montego Bay.
Nanoro hevitra ireo mpitantana ny orinasa avy ao amin'ny TUI fa ny angon-drakitra dia mampiseho fa avo ny fangatahana fitsangantsanganana an-tsambo mankany Jamaika.
Ny fahaizan'ny rivotra amin'ity vanim-potoana ririnina ity dia ho 79,000, izay 9% ihany no latsaky ny tarehin'ny ririnina talohan'ny COVID.
Ity fanambarana ity dia natao tany Dubai vao tsy ela akory izay, nandritra ny fivoriana nahitana ny minisitra Bartlett, talen'ny fizahan-tany Donovan White, ary ny mpanatanteraka ny vondrona TUI: David Burling - Markets sy Airlines an'ny CEO, ary Antonia Bouka - Fifandraisan'ny lehiben'ny governemanta sy ny tanjon'ny politikam-bahoaka.
"Ankehitriny, ny TUI, iray amin'ireo mpandraharaha fitsangatsanganana lehibe indrindra sy mpiara-miombon'antoka amin'ny fizarana fizarana ny indostrian'ny fizahan-tany, dia nanamafy ny hetsika homeporting ho an'ny fitsangatsanganana any Montego Bay. Ny tena zava-dehibe dia ny fitsidihana sy fiantsoana maromaro nomanina ao amin'ny Port Royal Cruise Port, manomboka amin'ny Janoary. Manantena izahay fa hisy antso dimy manomboka amin'ny Janoary ka hatramin'ny Aprily 2022 ao Port Royal, ”hoy i Bartlett.
Nandritra ny fifanakalozan-kevitra tamin'ny TUI, nanoro hevitra ireo mpitantana ny orinasa fa ny angon-drakitra dia mampiseho fa avo ny fangatahana fitsangantsanganana an-dranomasina ary nahavita nitana famandrihana nofoanana izy ireo. Nizara ihany koa izy ireo fa ny fahaizan'ny rivotra ho an'ity vanim-potoana ririnina ity dia ho 79,000, izay 9% ihany no latsaky ny tarehin'ny ririnina talohan'ny COVID.
Nanome toky ny mpitantana ny TUI i Bartlett fa Jamaika mijanona ho toerana azo antoka ary ambany dia ambany ny fandefasana COVID-19 ao anatin'ny lalantsara azo resahina, ary koa fampielezana vaksinin'ny mpiasa fizahan-tany tena matanjaka.
“Ny fahombiazan'ny vaksinin'ny mpiasanay dia tena nandaitra tao Jamaika, miaraka amin'ireo mpiasanay maro no mifidy ny hanao vaksiny feno. Manantena izahay fa tsy ho ela dia hankalaza ny 30-40% amin'ireo mpiasan'ny fizahan-tany ao Jamaika vaksinina izahay ary hampiakatra be ny vaksinin'ny sisa amin'ny mponina amin'ny Janoary, ”hoy i Bartlett.
Nanamarika ny minisitra Bartlett fa izy sy ny ekipany, dia efa niresaka tamin'ny mpiara-miombon'antoka lehibe hafa any Dubai momba ny drafitra hamatsiam-bola amin'ny vokatra fizahan-tany ao Port Royal.
"Nanana fifanakalozan-kevitra lehibe hafa momba ny Port Royal aho, izay mety hahita hetsika bebe kokoa ho avy mandritra ny taona sisa. Vao avy namarana fifanakalozan-kevitra vitsivitsy niaraka tamin'ny DP World aho, izay mety hiteraka fanatsarana lehibe eo amin'ny fifamoivoizana eoropeana mankany Karaiba, indrindra any Jamaika, ka ny Port Royal no faritra tena dinihina”, hoy i Bartlett.
“Faly aho amin'ireo dinika niarahanay hatreto teto Dubai ary antenaiko izany Hahita fampiasam-bola lehibe i Jamaika avy amin'ireo fifamatorana eto ireo, ”hoy izy.
DP World dia orinasa logistika iraisam-pirenena Emirati izay miorina ao Dubai. Ny fikambanana dia miompana amin'ny logistika entana, serivisy an-dranomasina, fampandehanana ny seranan-tsambo ary faritra ara-barotra malalaka. Niforona tao amin'ny 2005 izy io taorian'ny fikambanan'ny Dubai Ports Authority sy Dubai Ports International. Ny DP World dia mitantana kaontenera 70 tapitrisa eo ho eo izay entin'ny sambo manodidina ny 70,000 isan-taona, izay mitovy amin'ny 10% eo ho eo amin'ny fifamoivoizana eran-tany kaontin'ny seranan-tsambo 82 an-dranomasina sy an-tanety any amin'ny firenena 40 mahery. Hatramin'ny taona 2016, ny DP World dia mpandraharaha seranan-tsambo eran-tany voalohany indrindra, ary nanomboka teo dia nahazo orinasa hafa miakatra sy midina amin'ny rojo sanda.